शुरुवातकर्ताहरूको लागि थ्रीडी रेखाचित्र: उत्तम मोडलिङ सफ्टवेयर | अनलाइन क्रिएटिभहरू
नेरिया मोर्सिलो | | सामान्य, धेरै
प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो जीवनमा थ्रीडी रेखाचित्र देखापरेको छ। तिनीहरूमध्ये धेरै पहिले हातले कोरिएका छन्, तर विकसित र बढ्नको लागि धेरै ग्राफिक्स चाहिन्छ।
त्यसैले यस त्रि-आयामिक पोस्टमा, हामी तपाईंलाई 3D रेखाचित्र बारे थप जान्न अवसर प्रदान गर्दछौं, यसका लागि, हामीले तपाइँको लागि उपकरणहरूको एक श्रृंखला तयार गरेका छौं जसले तपाइँलाई हालैका वर्षहरूमा केन्द्रको चरणमा रहेको रेखाचित्रको यो शैलीको साथ तपाइँको नयाँ जीवन सुरु गर्न मद्दत गर्नेछ।
हामी अगाडि जान चाहँदैनौं र त्यसैले हामी तपाईंलाई पहिले नै यो रेखाचित्र शैली के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर व्याख्या गर्न जाँदैछौं।
1 रेखाचित्र वा 3D डिजाइन
2 शुरुआतीहरूको लागि 3D सफ्टवेयर
2.2 स्केच अप गर्नुहोस्
2.5 ६. Clara.io
2.6 थ्रीडी स्ल्याश
3 3D कलाकार र डिजाइनरहरू
3.1 ठूलो बच्चा
3.2 यानिक डुसेल्ट
रेखाचित्र वा 3D डिजाइन
स्रोत: थ्रीडी प्रिन्टर
थ्रीडी प्रविधि एक प्रकारको प्रविधि हो मुख्य रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका मा उत्पन्न र त्यो समयसँगै, विभिन्न देशहरूमा धेरै प्रख्यात थियो। यो 1915 मा सुरु भयो र पहिलो 3D छवि र ग्राफिक्स प्रक्षेपण गरिएको थियो।
उज्यालो र छायाँको बीचमा केही दशक पछि, 1980 मा IMAX देखा पर्‍यो, थ्रीडीका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका कोठाहरूमा चलचित्रहरू प्रक्षेपण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको कम्पनी। यस टेक्नोलोजीको ठूलो सुधारले विश्वभरि अचम्मको प्रतिक्रिया देखायो। त्यस क्षणदेखि, उपकरणहरू विकसित हुन थाले जसले थ्रीडीलाई संसारको नजिक ल्यायो।
शुरुआतीहरूको लागि 3D सफ्टवेयर
1995 मा सिर्जना गरिएको, ब्लेंडर एक पूर्ण थ्रीडी मोडलिङ सफ्टवेयर हो, एनिमेसन र भिडियो को दुनिया मा धेरै लोकप्रिय यो प्रस्ताव धेरै सुविधाहरू को लागी धन्यवाद। यो नि:शुल्क मात्र होइन, खुला स्रोत पनि हो, जसको मतलब यो निरन्तर सुधार भइरहेको छ। यो अलि जटिल लाग्न सक्छ तर यदि तपाइँ तुरुन्तै 3D मा डिजाइन सुरु गर्न आवश्यक छ भने यो धेरै उपयोगी छ।
ब्लेंडरको सबैभन्दा आकर्षक फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि यसले सम्पूर्ण थ्रीडी पाइपलाइनलाई समर्थन गर्दछ, जसमा मोडलिङ, एनिमेसन, सिमुलेशन, रेन्डरिङ, गति ट्र्याकिङ, इत्यादि। यो सफ्टवेयर क्रस-प्लेटफर्म र यो लिनक्स, विन्डोज र म्याक कम्प्युटरहरूमा उपलब्ध छ।
यो बहुभुज मोडलिङमा आधारित छ, यो आवश्यक रूपमा additive निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको समाधान होइन, तर यसले प्रविधिमा अनुकूलित ढाँचाहरूमा 3D मोडेलहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ।
स्केच अप गर्नुहोस्
Sketchup Mak, पहिले SketchUp को रूपमा चिनिन्थ्यो, 2000 मा LastSoftware द्वारा आर्किटेक्चरल डिजाइनमा प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको थियो, यो अब Trimble नेभिगेसन LLC को स्वामित्वमा छ।
स्केचअप कार्यक्रम नि:शुल्क छ र सरल उपकरणहरू प्रदान गर्दछ प्रयोगकर्ताहरूको विस्तृत स्पेक्ट्रमका लागि: निर्माताहरू, आर्किटेक्टहरू, डिजाइनरहरू, इन्जिनियरहरू र निर्माणकर्ताहरू। यो कार्यक्रमले तपाईंलाई सजिलैसँग 3D मोडेलमा आफ्ना विचारहरू स्केच गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाइँ तपाइँको सिर्जना सुरु गर्नु अघि, तपाइँ एक टेम्प्लेट चयन गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई सम्पूर्ण मोडेलिङ प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्नेछ। यो एक धेरै बहुमुखी 3D सफ्टवेयर हो, जसले उपयोगिता र कार्यक्षमता बीच राम्रो सन्तुलन कायम राख्छ, शुरुआतीहरूका लागि राम्रो विकल्प जो CAD सिक्ने बारे गम्भीर छन्।
मूर्तिकला 3D मोडेल सिर्जना गर्न आधारको रूपमा डिजिटल मूर्तिकला प्रयोग गर्दछ। अर्को शब्दमा, तपाईले आफ्नो 3D मोडेलहरू विभिन्न ब्रश स्ट्रोकहरूसँग कुनै पनि जाललाई आकार दिएर सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईको मोडेल सिर्जना गर्नु भनेको माटो प्रयोग गरेर वस्तुलाई आकार दिनु जस्तै हुनेछ। यो सफ्टवेयर एक गोलाको रूपमा सुरु हुन्छ, त्यसपछि प्रयोगकर्ताले स्ट्रेचिङ, खन्ने, स्मूथिङ, इत्यादि द्वारा इच्छित मोडेल गर्न सक्छ। एनिमेटेड क्यारेक्टर वा भिडियो गेमहरू सिर्जना गर्दा यसले यसलाई एक आदर्श उपकरण बनाउँछ।
साथै, यदि तपाईलाई थाहा थिएन भने, Sculptris पिक्सोलोजिकसँग सम्बन्धित छ, Zbrush को निर्माता। यो शुरुआतीहरूको लागि राम्रो 3D सफ्टवेयर हो, यो अब विकास अन्तर्गत छैन, तपाईं अझै पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो नयाँ अपरेटिङ सिस्टमहरूसँग उपयुक्त नहुन सक्छ।
Vectary एउटा अनलाइन थ्रीडी मोडलिङ उपकरण हो जसको सहायताले तपाईं 3D डिजाइनहरू सिर्जना गर्न, साझेदारी गर्न र अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर मानक जाल मोडलिङ को संयोजन हो, उपविभाग मोडलिङ, र प्यारामेट्रिक प्लगइनहरू।
यो शुरुआतीहरूका लागि 3D मोडलिङलाई सजिलो बनाउनको लागि ग्राउन्ड अपबाट निर्माण गरिएको थियो, तर पेशेवरहरूका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। थप रूपमा, मोडेलहरू क्लाउडमा बचत गरिएका छन्, जहाँ तिनीहरू कुनै पनि ब्राउजर मार्फत पहुँचयोग्य छन्, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू सजिलैसँग पहुँच गर्न र संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्ना मोडेलहरू साझेदारी गर्न सक्छन्।
Clara.io, एक रेन्डरिङ र मोडलिङ सफ्टवेयर हो, Exocortex द्वारा जारी गरिएको, तपाईले यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि, एक थ्रीडी मोडलिङ, एनिमेसन र रेन्डरिङ सफ्टवेयर हो तपाईंको वेब ब्राउजरमा चल्ने पूर्ण-विशेषतायुक्त क्लाउड-आधारित।
यो समाधानले तपाईंलाई जटिल 3D मोडेलहरू सिर्जना गर्न, अविश्वसनीय फोटोरियलिस्टिक रेन्डरिङहरू सिर्जना गर्न र कुनै विशेष सफ्टवेयर स्थापना नगरी तिनीहरूलाई साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। सिक्ने धेरै जटिल छैन, जसले डिजाइनको यस क्षेत्रमा धेरै अनुभव नभएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
यस सफ्टवेयरमा, 3D ज्यामितिहरू विभिन्न तत्वहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसलाई कम्पोनेन्ट भनिन्छ। तीन अलग-अलग घटकहरू अनुहार, किनारा र ठाडोहरू हुन्।
3DSlash 2013 मा Silvain Huet द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, जो आफ्नो छोराले भिडियो गेम Minecraft खेल्ने प्रेरणा पाएका थिए, जुन एउटा खेल हो जहाँ तपाईं साना क्यूबहरूद्वारा सिर्जना गरिएको संसारमा बाँच्नुपर्छ। 3Dslash, Minecraft जस्तै, साना ब्लकहरूको शक्ति प्रयोग गर्दछ जुन तपाईं हटाउन वा सँगै जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईंको 3D मोडेल सिर्जना गर्न मद्दत गर्न।
सफ्टवेयरले तपाईका डिजाइनहरूलाई आकार दिन मद्दत गर्न विभिन्न उपकरणहरू प्रदान गर्दछ, जसमा वास्तविकताका अंशहरूलाई 3D मा रूपान्तरण गर्ने क्षमता समावेश छ जुन तपाईँले सजिलै अपलोड र ट्रेस गर्नुहुन्छ।
थप रूपमा, यसमा ०.१ मिमी सम्मको रिजोल्युसन छ, त्यो हो, यो कार्यक्रमले तपाईंलाई आफ्नो वस्तुलाई एकदम सही रूपमा बनाउन मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई आफ्नो रचनात्मक वास्तविकताहरूलाई जीवनमा ल्याउन अनुमति दिन्छ।
यो 3D सफ्टवेयर विशेष गरी शैक्षिक उद्देश्यका लागि सिर्जना गरिएको हो, यसको विकास यसरी गरिन्छ कि जो कोहीले OpenSCAD प्रयोग गर्न सक्छन्, अधिक व्यावसायिक CAD सफ्टवेयर।
वस्तुहरू र तिनीहरूको रूपान्तरणको विकासको लागि आदेशहरू रंगीन ब्लकहरू द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ, प्रसिद्ध निर्माण खेलौनाहरू, LEGO को सम्झना दिलाउने। BlocksCAD कोड OpenSCAD सँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ त्यसैले तपाईंले त्यहाँ आफ्ना मोडेलहरूमा फिनिसिङ टचहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
निर्यात ढाँचाहरू OpenSCAD वा STL हुन सक्छन्। जो कोहीले पनि सफ्टवेयर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, BlocksCAD सँग 3D मोडलिङमा विभिन्न ट्यूटोरियलहरू सहितको Youtube च्यानल छ।
3D कलाकार र डिजाइनरहरू
यहाँ हामी तपाईंलाई प्रेरणा दिने समाप्त गर्न कलाकारहरूको श्रृंखला छोड्छौं:
ग्रान्ड चामाको सबैभन्दा क्रान्तिकारी 3D कलाकार मध्ये एक मानिन्छ। मेक्सिको सिटीमा जन्मेका उनी मास्कको पछाडि लुकेका छन् जसले आफ्नो पहिचान लुकाउँछ तर आफ्नो प्रतिभा होइन।
यस कलाकारको विशेषता भनेको निस्सन्देह 3D उपकरणहरू मार्फत डिजाइन र सिर्जना गरिएका क्यारेक्टरहरू सिर्जना गर्ने क्षमता हो। उसको कामको विशेषता भनेको उसले प्रयोग गर्ने रंगहरूको विविधता हो, किनकि उहाँ एक कलाकार हुनुहुन्छ जसले रंग दायरा र रंगहरूसँग खेल्न मन पराउँछन्।
स्रोत: रमाईलो सिनेमा
यानिक, फिल्म उद्योगमा उत्कृष्ट डिजिटल कलाकार मध्ये एक मानिन्छ। उहाँ एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र कलात्मक शैली संग काम गर्नुहुन्छ अवधारणा कला।
उनी म्याट पेन्टिङ र थ्रीडीका विशेषज्ञ पनि हुन्। थप रूपमा, उनले प्राविधिक चित्रण र डिजिटल प्रभावहरूमा आधारित उत्कृष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण अध्ययन गरे र प्राप्त गरे, जुन वास्तवमा उनले पछि आफूलाई वर्षौं पछि समर्पित गर्नेछन्।
जस्ता निर्माण निर्देशनका लागि परिचित छन् ट्रान्सफर्मर, स्टार ट्रेक, इन्डियाना जोन्स: किंगडम अफ द क्रिस्टल स्कल), संसारको युद्ध, स्टार वार्स: एपिसोड III, क्यारिबियनको समुद्री डाँडा, टर्मिनेटर III, दुई टावर्स, टाइटन एई अरू धेरैमा।
उनी पात्रहरू सिर्जना गर्नमा विशेषज्ञता प्राप्त एक चित्रकार र डिजाइनर हुन्। Cecy 3D मोडलिङ मा एक विशेषज्ञ छ, आफ्नो टुक्रा संग कथाहरु सिर्जना मा, र संगीत को एक महान प्रेमी छ।
उनी अहिले आफ्नो उत्पादन गर्ने सपना पूरा गरिरहेका छन् कला खेलौना आफ्नो डिजाइन संग: Magalaxy Toys को सहयोग मा, उसले पहिलो सोफुबी फिगर लन्च गर्यो जसले धेरै धेरै क्यारेक्टरहरु संग संग्रह सुरु गर्नेछ।
उनी निस्सन्देह यस क्षणको सबैभन्दा उत्कृष्ट 3D डिजाइनरहरू मध्ये एक हुन्।
उनलाई पेशाले वास्तुकार मानिन्छ र VFX को बारे मा भावुक छविशेष गरी शैली प्रकाश.
उनले विज्ञापनमा काम गरेका छन् र Autodesk र ​​Nvidia जस्ता ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गरेका छन्, साथै उत्पादनहरू जस्तै यो घूमन मृत, हिड्ने मरे डर, नायक पुनर्जन्म वा मेक्सिकोमा पहिलो Netflix मूल सामग्रीमा, Cuervos क्लब.
उसको कामले सधैं एक भोल्युमेट्रिक तत्वको रूपमा प्रकाश लिएको छ जसले उसको थ्रीडी दृश्यहरूमा यथार्थवाद ल्याउँछ।
3D डिजाइन हाल धेरै पक्षहरू मार्फत जान्छ, धेरै वस्तुहरूको रेन्डरिङ र मोडेलिङमा समर्पित छन्, जबकि अरूले चित्रण प्रयोग गर्छन् र यसलाई ग्राफिकभन्दा बाहिर जाने यथार्थपरक कलामा परिणत गर्छन्।
पक्कै पनि हामी तपाईंलाई व्यावसायिक थ्रीडी रेखाचित्रमा बदल्न सक्दैनौं। तर हामी पक्का छौं कि यो पोस्टको साथ हामीले तपाईलाई तपाईको अर्को लक्ष्य के हुनेछ भन्ने नजिक ल्याएका छौं।
हामीले तपाईंलाई कलाकारहरूको यो सानो शृङ्खला छोडेका छौं ताकि तपाईंले आफ्नो शैली पत्ता लगाउन र पुन: पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, डिजाइनको अभिजात वर्गमा रहेकाहरूबाट प्रेरित हुनुहोस् र तपाईंले कुन बाटो रोज्नुपर्छ भनी पत्ता लगाउनुहोस्। अब तपाइँको लागि पूर्ण खोजी गर्ने र 3D डिजाइनको बारेमा थप जान्न र रचनात्मकतालाई यसको भूमिका खेल्ने समय आएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » शुरुआतीहरूको लागि 3D रेखाचित्र